Weeraro Askar Badan Lagu Dilay Oo Afghanistan Ka Dhacay. – Calamada.com
Weeraro Askar Badan Lagu Dilay Oo Afghanistan Ka Dhacay.
Weeraradan oo ahaa dagaallo toos ah waxey ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ku qaadeen saldhigyo iyo fariisimo kala duwan oo maleeshiyaatka Xukuumadda Kaabul ay ka kala sameysteen Waqooyga iyo Konfurta dalka Afghanistan.
Howlgalka hore waxey ciidamada Mujaahidiinta Dhaalibaan ku qaadeen Bar- kontarool oo maleeshiyaatka Aminiga Ridada Kaabul ay dhigteen degmada Showraabik oo ka tirsan Wilaayada Qandahaar ee Konfurta dalkaasi.
Inta la xaqiijiyay dagaalkan Tooska ah waxaa lagu dilay 17 askari oo ah maleeshiyaatka Maamulka Murtad Ashraf Gani tiro kalane waa lagu dhaawacay dagaalkaasi.
Ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa weerarkan ku qabsaday oo ku qaniimeystay hal gaari iyo hub kala duwan.
Howlgalka Labaad oo isaguna ah dagaal toos ah waxey ciidamada Mujaahidiinta Dhaalibaan ku qaadeen Labo Fariisin oo maleeshiyaatka Ridada Kaabul ay ka sameysteen magaalada Xarunta u ah Wilaayada Baglan ee Waqooyga dalka Afghanistan.
Dagaalkan ayaa lagu dilay 11 la tirsan maleshiyaatka Ridada Kaabul Afar kalane waa lagu dhaawacay waxeyna ciidamada Mujaahidiinta dagaalkan ku qaniimeysteen hub kala duwan.
Weeraradan kala duwan ee ka kala dhacay Waqooyga iyo Konfurta dalka Afghanistan ayaa qeyb ka ah Xamlo dagaaleedka Al-khandaq waxeyna kusoo aadayaan xilli saacadihii lasoo dhaafay ciidamada Mujaahidiinta Dhaalibaan qarax culus ay la beegsadeen kolanyo ka tirsan ciidamada Saliibiyiinta Mareykanka kuwaasi oo ku socdaalayay qeybo ka mid ah Wilaayada Kaabul waxa uu qaraxa haleelay oo uu burburiyay hal gaari gabi ahaan askartii Saliibiyiinta ee la socotay gaarigaasna weey wada halaagsameen.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 11-04-1440 Hijri.
Next: Qarax Ka Dhacay Duleedka Degmada Buulo Mareer.